Ny zavatra Niainany Niaraka ao Shina Amin’ny maha-Vahiny Mpampianatra teny anglisy JIMMYESL
Ny olona rehetra mila olona — dia mandeha ny hira avy ny Blues Rahalahy. Izany dia tena marina fa ny olona rehetra dia mila mitory izany raha toa ianao ka handeha, mba ho velona sy ny fampianarana tao Shina ny taona maro, dia azo inoana fa ianao no hahita mampiaraka ao Shina amin’ny fotoana iray. Ao amin’ity lahatsoratra ity, dia ho mizara ny sasany ny zavatra niainan’ny tena manokana ny fiarahana sy tantaram-pitiavana ao Shina sy ny fanomezana ny sasany torohevitra momba ny fomba hiatrehana ny olana isan-karazany izay mety ho tojo. Malagasy toa tena»anarana iombonana amin’ny»foto-kevitra ao Shina izany raha toa ianao ka ny lehilahy nampianatra teny anglisy lehibe ireo mpianatra ao amin’ny oniversite ao Shina ianareo, dia ho hitanareo voahodidin’ny vehivavy tanora, mpianatra, ny sasany amin’izy ireo dia, mazava ho azy, ho tena tsara tarehy. Izaho manokana dia mahafantatra ny sasany avy any ivelany ny mpampianatra izay efa nanandrana ny daty ny mpianatra, fa na dia izany tokoa fakam-panahy, TSY amin’ny toe-javatra rehetra hatramin’izao ny mpianatra.
Eny, misy maro ny antony. Voalohany, ny mpampianatra dia natao tao amin’ny toerana misy ny fitokisana sy ny tsy tokony hamadika izany fahatokiana izany. Any ANGLETERA, tantaram-pitiavana ny fifandraisana eo amin’ny mpampianatra sy ny mpianatra dia tsy ara-dalàna ary maro ireo mpampianatra no efa nampidirina am-ponja noho ny mahazo an-firaisana ara-nofo miaraka amin’ny mpianatra.
Faharoa, ny fiteny tsy fantatra dia wag
Ny mpianatra sy ny mpiara-dia aminy tsaho momba ny ianao. Mpampianatra ao Shina dia tokony hajaina tanteraka ny mpianatra fa tsy misy fomba tsara kokoa mba handrava ity manaja noho mba hiezaka ny hitaona ny mpianatra. Farany, ny sekoly ao Shina no tsy mankasitraka ny tantaram-pitiavana ny fifandraisana eo amin’ny mpianatra sy ny mpampianatra. Raha toa ianao ka hita avy, ny fifanarahana dia ho faranana, dia ho very asa ary mety hahazo ny ratsy momba izay hahatonga azy ho be sarotra ho anao mba hahazo asa vaovao. Izay avy eo dia, dia afaka mahita ny ankizivavy na ny ankizilahy ao Shina. Trano fisotroana sy trano fandihizana dia mazava indrindra ny toerana mba hijery fa ny olana dia ny olona izay hihaona any dia mety tsy ho afaka miteny ny teny anglisy. Niaraka ny mpiara-miasa (na ny mpiara-vahiny ny mpampianatra, na ny Shinoa tao an-toerana iray) dia safidy fa rehefa niezaka aho ny daty Shinoa mifanitsy mpampianatra taona vitsivitsy lasa izay, dia nihodina teo satria izy no mitady ao an-toerana ny olona, ary tsy ny vahiny. Izany dia iray amin’ireo olana fa dia mila mahafantatra — misy tovovavy Shinoa dia tsy te-hahazo an-fifandraisana amin’ny vahiny satria fantany fa tamin’ny fotoana sasany, dia nandao ny firenena, ary izy dia tsy maintsy manapa-kevitra ny hanaraka anao na ny handrava anao. manosika noho Izany dia nitodika tany amin’ny aterineto. Misy maro ny fiarahana vohikala ao Shina toy Shina ny Fitiavana, ny Aziatika Mampiaraka, Sinoa oroka sy mampifandray ny tokan-tena eo ny hafa, ary izany dia tamin’ny iray amin’ireo vohikala ireo, fa nihaona ny taloha-girlfriend. Na izany aza, tsarovy fa i Shina dia lavitra be ny firenena ary raha manao hihaona ny ankizivavy iray ianao, toy ny avy amin’ny iray amin’ireo toerana ireo, dia tena azo inoana fa tsy maintsy mandeha lavitra be mifanena aminy. Toy ny raharaha amin’ny fampiasana na mampiaraka amin’ny tranonkala, any Shina ianao koa dia tokony ho mailo ny rehetra ny tovovavy izay manomboka ahoana ny fitiavana ho anao alohan’ny tsy manana na dia nihaona azy tao ny olona, ary tampoka teo dia mahita ny tenany eo amin’ny fahoriana, ary manomboka manontany ianao noho ny vola. Izany ihany koa dia fantatra fa maro ny ankizivavy ao Shina te hanambady Anglisy na Amerikana ny olona fotsiny ny mba hahazo»visa»noho izany, alohan’ny anareo hahazo koa dia tafiditra lalina amin’ny zazavavy avy ao Shina, ho azo antoka fa tiany ianao ho an’ny tenanao ary tsy noho ny vola na ny fahafahana hahazo ny visa. Vehivavy shinoa amin’ny ankapobeny tena zavatra ara-nofo. Tsy toy ny toe-draharaha any Andrefana izay miraiki-pitia dia vokatry ny fihetseham-po fifandraisana izay mitranga ho azy eo amin’ny olona roa, any Shina, ny vehivavy ho mora handray kokoa ny fomba fandalinana ny fitadiavana mpiara-miasa. Ny fibodoana, ny sata sy ny harena ary koa ny fankatoavana ray aman-dreny ireo lafin-javatra rehetra izay Shinoa zazavavy dia handinika, alohan’ny manapa-kevitra na tsia ny firotsahana amin’ny fifandraisana miaraka aminao. Ny vehivavy Sinoa no akaiky indrindra ny reniny ka ahoana no azonao tsara miaraka amin’ny olon-tiany ny reny ihany koa no mamaritra ny fahombiazana na ny tsy fahombiazana ny fifandraisana. Raha ny sipa tia anao be dia be sy matotra ianao, dia ho tena tia ny hitondra anareo ho any reniny ny boky tsara. Noho izany, dia tsy izany ihany no tsy maintsy mividy fanomezana ho an’ny olon-tiany, tsy ho ela dia ho antenaina mividy fanomezana ho an’ny ray aman-dreniny ihany koa. Vehivavy shinoa koa ny tena hentitra be sy mafy loha. Ianao no vahiny ao amin’ny firenena, ka izy ireo dia manantena anao hanary rehetra ny fomba amam-panao izay manohana azy. Raha miezaka ny milaza ny Shinoa sipa ianao na mandeha any an-tanindrazana dia miara-hihaona amin’ny ray aman-dreninao, dia mety ho nilaza fa tsy azo atao izany satria araka ny Shinoa ny fomba amam-panao, ny tsy manam-bady ny vehivavy dia tsy afaka mivezivezy ivelan’ny tranony faritany tamin’ny sipany raha tsy aorian’ny fanambadiana. Tamin’ny voalohany, lahatsoratra momba ny fampianarana ao Shina, tsy voalaza ny hevitry ny hoe»ny tavany»any amin’ny kolontsaina Sinoa. Ny vahoaka shinoa no mihevitra fa tsy mandainga mba hamonjy ny tavany ary izany dia indrisy anefa mihatra ihany koa eo amin’ny sehatry ny fifandraisana. Ny ex-sipany ohatra, nilaza tamiko fa izy nanana ray izy, ary dia misotro ronono orinasa ny mpiasa. Izany dia tsy mandra-ny ny ray, tonga tao Shina mba hiresaka momba ny fanambadiana tsy izay aho dia nahita fa ny ray efa tena maty taona maro tany aloha aho dia efa nihaona taminy. Rehefa nanontany azy hoe nahoana izy no efa nandainga, nilaza izy fa tsy toy ny miresaka momba ny fahiny sy fa izy tia ny mody fa ny ray no mbola velona sy miaraka aminy ao amin ny fanahy. Raha isika no zavatra iray, dia nahita koa aho fa izy mbola mpikambana mavitrika ao amin’ny maro mampiaraka toerana na dia tsy fantatro izy raha ny marina dia mitondra ny datin ny olon-kafa, raha izy no miaraka amiko. Ny vehivavy Sinoa manantena fiainana lafo vidy avy amin’ny vadiny, ary koa ny mety tsy ho vonona hanambady fa tsara na ratsy. Aho dia tena tohina amin’ny fomba indrafo ny ex-sipany no tao amin’io lafiny io. Raha vao toy ny firotsahana dia ny karatra, dia niala tamin’ny asany momba ny fialan-tsiny fa ny orinasa dia nanapa-kevitra mba hamindra toerana ny iray hafa dia ampahany amin’io tanàna io ihany, ary ny faharetana hatramin ny ela fiara fitateram-bahoaka dia be loatra ho azy. Izany dia tena mazava fa nieritreritra izy hoe fa indray mandeha izy mahazo manambady, izy dia tsy maintsy miasa. Raha toa ka hampivelatra ny kilema na ny toe-javatra ara-pitsaboana, ny Sinoa sipa mety hanapa-kevitra ny handao anao. Ny ex-sipany nandao ahy, satria izy tsy afaka hanaiky ny mety ho vadiny izay efa hypertension, na dia na dia ny toe-javatra no tsaboina. Ao Shina, misy ny diso fa ny vahiny rehetra dia manan-karena. Tsy mahazatra ho an’ny tanora vehivavy Shinoa mba nataony tao be dia be ny ezaka ny fianarana teny anglisy tany am-pianarana izany fa afaka kitapo vahiny olon-tiany. Ny Sinoa zazavavy tao amin’ny tapaky ny volana faha-Roapolo taonany no ho miakatra ihany koa ny mitady, tsy hoe ho an’ny olon-tiany fa koa noho ny mety ho avy ny vadiny. Raha ny marina, dia mety ho tena inoana fa ny vehivavy toy izany dia ho vonona ny handeha avy amin’ny daty amin’ny lehilahy raha tsy izy no tena fihetseham-po mahery ho azy toy ny mety ho vady. Izany dia mety ho tena mampatahotra ho an’ny vahiny mba ho nataony eo ambany io karazana fanerena tany am-piandohana-tsehatra amin’ny fifandraisana mba ho fampitandremana fa izany no zavatra iray izay mety mila miatrika. Noho izany, dia mifidy daholo ny vata sy ianao samy mirotsaka amin’ny fifandraisana. Raha mandeha tsara, dia tsy nisy resaka fotoana mialoha ny momba ny fanambadiana mipoitra. Mba hanambady vehivavy Sinoa, izany dia ho ilaina amin’ny ho anao ny manokana ny fananana ao Shina sy mba hanome ny ‘dot’. Ny ex-sipany te-trano niaritra RMB, (£) ary ny RMB, (£) ny ‘dot’. Tsy izay ihany, fa izy koa dia nisisika nanamafy fa ny trano dia tsy maintsy nividy tsotra izao, tsy mandray ny findramam-bola na ny antoka. Tambin’izany noho ny anjara, ny vehivavy ny lafiny ara-dalàna antenaina mba hividy ny fiara na ny manome ny trano, fa raha ny sipa no tsy avy amin’ny fianakaviana manan-karena, hoy izy, dia lazaiko anareo fa izy dia miala amin’ny fanarahana ny iray amin’ireo azy manokana ny fomba amam-panao, satria izany fomba amam-panao ihany fa»manan-karena ny fianakaviana». Ny zazavavy avy amin’ny tsy tsara intsony ny fianakaviana no mieritreritra na inona na inona ny mangataka ny olona ny lafiny vola ho an’ny zavatra rehetra, raha ny fianakaviana no tsy mandray anjara amin’ny denaria iray mankany amin’ny lany ny fananganana ny mpivady an-trano. Vehivavy shinoa koa dia manantena ny maro lafo ny fanomezam-pahasoavana. Janoary sy febroary no marimarina kokoa lafo volana ho manana fifandraisana ao Shina satria na ny Andron’ny mpifankatia sy ny Sinoa Fetin’ny Lohataona ho lavo manodidina io fotoana io. Ny hanome anao an-tsaina ny karazana fanomezam-pahasoavana ianao, dia mety ho nangataka ny manome, ny sasany zavatra fa ny taloha-girlfriend dia nangataka ahitana ny iPhone, Chanel ditin-kazo manitra sy volamena jeweler. Ankoatra izany, izy koa dia miandry ny nentim-paharazana mena fonosana (vola fanomezana) ho an’ny Shinoa Fetin’ny Lohataona. Izy mihitsy aza no mihevitra ireo hafahafa miseho ho toy ny fanomezam-pahasoavana kely, ny fandresen-dahatra ny maha, Tsara, raha tsy afaka mividy ahy amin’ny iPhone, ny fomba eto an-tany ianao no mba ho afaka ny hividy trano. Rehefa niezaka aho mba milaza fa ireo no lafo loatra ny valim-panontaniana azoko, Raha tsy tia anao izy, tsy mila ny fanomezam-pahasoavana. Taona maro lasa izay, ny lehilahy iray hafa dia manenjika ahy, izy no manan-karena, dia nanana trano sy fiara, fa tsy tia azy, ka tsy maniry na inona na inona avy aminy. Izy no nanao izany feo toy ny hoe lavishing ny vola azy dia ny tombontsoa tokony ho feno fankasitrahana. Izany dia afaka ny ho tena taitra ho an’ny vahiny mba ho miatrika izany fangatahana, indrindra rehefa tsy zatra mividy na inona na inona mihoatra noho ny sôkôlà na voninkazo ny vehivavy sakaizany an-trano indray. Ao Shina, ny lehilahy iray ihany koa no andrasana mba handoavana ny zava-drehetra ao fifandraisana izany eo an-tampony ny fanomezam-pahasoavana, dia ho hitanao fa mandoa ho an’ny sakafo, fitaterana, ary angamba ilaina ihany koa rehefa eo amin’ny daty ny vehivavy Sinoa. Raha misy ny zavatra iray izay efa nianatra avy amin’ny fananana Shinoa sipa, izany dia ny hoe mampiaraka ny vehivavy Sinoa fa lafo fikasana. Tandremo fa amin’ny kolontsaina Sinoa, ny fivoriana ny vehivavy ny ray aman-dreny dia tantamount ny fanoloran-tena ny fanambadiana. Raha tsy azonao antoka ve ianao dia ho vonona hanambady ny Shinoa sipa, TSY manaiky ny fanasana hihaona an’ny ray aman-dreniny. Ankehitriny azoko antoka fa maro aminareo no manontany tena raha toa ka mendrika ny manahirana ny mampiaraka ao Shina amin’ny zazavavy avy ao Shina. Na dia eo aza ny zava-drehetra izay efa namaky hatramin’izao, misy tombontsoa amin’ny fananana ny Shinoa tao an-toerana sipa ao Shina. Ohatra, vahiny ny mpampianatra dia afaka mahatsapa tena ho irery sy mitoka-monina ao Shina. Rehefa dinihina tokoa, efa niala daholo ny namana sy ny fianakaviana hiverina an-trano mba ho tonga any Shina ary satria tsy Shinoa maro ny olona miteny malagasy, afaka ho sarotra ny ho namana eto. Ny Sinoa sipa afaka hitandrina ny fahasorenana sy ny manirery ao amin’ny helo-drano sy hanome anao ny maro sambatra ny fotoana. Izy dia afaka ho olona iray miresaka rehefa irery ao an-trano rehefa avy ny andro any am-piasana, izy no hampianatra anareo ny Sinoa sy hanampiana anao handresy ny fiteny samihafa ary koa ny hafa azo ampiharina olana izay mety hiatrika ao Shina. Satria izy no mahafantatra ny rafitra ao Shina, dia atao ihany koa ny manome anao torohevitra sarobidy rehefa manana olana sy fampaherezana rehefa manahy na matahotahotra. Noho ny fomban-drazana sy ny kolontsaina, ny zazavavy avy ao Shina dia mety hanome ny fahatsapana ho tsy prudish fa tokony hahomby eo nisintona ny iray, ianao dia hahita fa izy dia tena afaka manome ny tandrefana namany iray mihazakazaka ny vola ao amin’ny sampan-draharahan’ny fifandraisana akaiky. Aho dia tena tohina raha ny marina amin’ny fomba ambony ny ex-sipany ny firaisana ara-nofo fiara, indrindra raha jerena ny zava-misy fa ny firaisana ara-nofo alohan’ny fanambadiana dia tena nankasitraka amin’ny kolontsaina nenti-paharazana Shinoa. Noho izany, araka ny azonao atao jereo, ny fiarahana ao Shina dia ny sabatra roa lela. Ny vehivavy Sinoa dia afaka ny ho tena manohana sy ho amin’ny fahafinaretana, fa izy koa dia afaka ho lafo vidy sy hentitra be. Alohan’ny barotra any amin’ny mety minefield ny fifandraisana amin’ny vehivavy Sinoa, dia tokony handinika am-ş pitandremana ny torohevitra ato amin’ity lahatsoratra ity
← Top Best trano fandihizana mba Hihaona Ankizivavy ao Shaoxing ny Fiainana China Buying Guide